Ikhabhinethi epholileyo, uxolo olunyulu! - I-Airbnb
Ikhabhinethi epholileyo, uxolo olunyulu!
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMariano
Umbono ogqwesileyo weentaba, umngangatho wangaphandle wamaplanga, igalari egqunywe ngebarbecue, intulo, ihonjiswe kakuhle, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlambela eline-suite, yonke into yokuqinisekisa ukuhlala okuhle. Indawo ezolileyo kakhulu, kufutshane neVilla General Belgrano.
ILos Reartes yidolophu encinci enembali eninzi, kule ndawo unokufikelela ngokulula kwiVilla General Belgrano, iSanta Rosa, iLa Cumbrecita, iRio los Reartes kunye neelwandle zayo, iLake Los Molinos, njl.
Indawo entle yokuhamba, ukukhwela ihashe kunye nokukhwela ibhayisekile nosapho okanye abahlobo, umlambo mhle, uneendawo ezininzi zokuhlamba kwaye uchithe imini, kwaye indawo inomdla omkhulu wabakhenkethi, unokufikelela kwiVilla General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita , La Cumbrecita, Villa Berna, San Agustin, Reservoir, njl
Uyakuhlala ekhona umntu okhoyo